Soo iibso ayaa beddeleysa Ciyaarta eCommerce
Wax ka beddelka ciyaarta adduunka ee eCommerce, ma jiro oo aan ahayn madal Shopify ah. Asal ahaan, barnaamijka dukaamaysiga wuxuu ku xiraa dhammaan khibrada dukaamaysiga moobiilka, oo ah, helitaan, lacag bixin, iyo u geyn hal codsi. Macaamiisha waxay ku galaan barnaamijka oo emayl ah, iyagoo raacaya kuwa kala duwan ee Shopi ...
Marka ay timaaddo websaydhkaaga elektaroonigga ah, bixinta khibrad adeegsi oo wanaagsan (UX) waxay qaadataa wax ka badan oo kaliya naqshad quruxsan. Waxay ku lug leedahay dhowr qaybood, dhammaantoodna wada shaqeynaya, si ay uga caawiso dadka u socdaalaya barta inay ku wareegaan oo ay helaan waxa ay raadinayaan. Faahfaahinta alaabada illaa ...
Carrie Lam waxay wacad ku martay inay ilaalinayso xaalada Hong Kong ee duulimaadka, xarunta saadka
Madaxa Fulinta ee Maamulka Gaarka ah ee Hong Kong (HKSAR) Carrie Lam ayaa Isniintii sheegtay in dowladda HKSAR ay ka go’an tahay inay ilaaliso maqaamka Hong Kong ee ah xarun duulimaad caalami ah, xarun badeed caalami ah iyo xarun saadka gobolka. Lam ayaa sameeyay inta soo hartay ...
Shirkadda Diyaaradaha ee Mareykanka ayaa 25,000 oo shaqaale ah ka xayiraysa bisha Oktoobar
Shirkadda Diyaaradaha ee American Airlines si ay u furto 25,000 oo shaqaale ah bisha Oktoobar American Airlines ayaa soo saari doonta ogeysiisyo 25,000 oo shaqaale ah oo ay ku wajahayaan furfurnaan suurta gal ah Oktoobar 1, labada maamule ee ugu sareysa ayaa ku sheegay qoraal ay u direen shaqaalaha Arbacadii. Dammaanadda federaalka ee warshadaha diyaaradaha, oo la qaadi doono Oktoobar 1, ...
Waa maxay 3pl iyo sida ay u fuliso amarada?
Haddii aad tahay ganacsi e-ganacsi & milkiile ganacsi oo aad u tiro badan, markaad go'aansato inaad bilowdo, amar fulintu waa qayb muhiim u ah ganacsigaaga. Markaad xirfaddaadu sii socoto, waxaad si tartiib tartiib ah kuugu adkaataa inaad la qabsato shaqada amar fulinta guriga dhexdiisa waxaadna doorbideysaa inaad waqti badan ku bixiso ...